महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्सको सीईओमा रमेशकुमार भट्टराई नियुक्त
बैंकिङ खबर । महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ)मा रमेशकुमार भट्टराई नियुक्त भएका छन् । इन्स्योरेन्सले पुस १७ गतेदेखि लागू हुने गरी भट्टाईलाई कम्पनीको सीईओ पदमा नियुक्त गरेको हो । उनको कार्यकाल चार बर्षको हुनेछ । वाणिज्य विषयमा स्नाकोत्तर र …
कामना सेवा विकास बैंक र जनरल इन्स्योरेन्सबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
बैंकिङ खबर । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड र जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेडबीच पुस १७ गते बैंकान्स्योरेन्स सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा कामना सेवा विकास बैंकको तर्फबाट कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण वस्नेत र जनरल ईन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेडको …
एनआईसी एशिया बैंक र सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स बीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
बैंकिङ खबर । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले सन नेपाल लाइप mइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडसँग बैंकास्योरेन्स सम्झौता गरेको छ । यस सम्झौताअनुसार अब यस बैंकका ग्राहकहरुले मुलुकभर फैलिएको २७० वटै शाखाहरुबाट सहज रुपमा सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको जीवन बीमा पोलिसीहरु …
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका सीईओले राजीनामा दिए
बैंकिङ खबर । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) बीरविक्रम रायामाझीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले पुस २० गतेदेखि लागू हुने गरी कात्तिक २० गते नै राजीनामा दिएका हुन् । रायमाझीले अर्थमन्त्रालयको दबाबमा राजीनामा दिएको बताइएको छ । …
अब बीमा किन नगर्ने ? एक करोडको सम्पत्ति हजारमै गर्न सकिन्छ बीमा
बैंकिङ खबर । अब एक करोडको सम्पत्तिको बीमा एक हजारमै गर्न मिल्ने भएको छ । वार्षिक पाँच हजार शुल्क (प्रिमियम) मा १ करोड रुपैयाँसम्मको सम्पत्ति बीमा हुने भएको छ । हालै जारी भएको सम्पत्ति बीमा निर्देशिका (सम्पत्ति तथा घर बीमा) मार्फत …
सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र सिभिल बैंकबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
बैंकिङ खबर । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र सिभिल बैंक बिच बैंकास्योरेन्स सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतामा सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजकुमार अर्याल र सिभिल बैंकको तर्फबाट सिबिओ सुजितकुमार शाक्यले हस्ताक्षर गरे । यस …
संचयकोषका बचतकर्ताको पुनर्बिमा स्वदेशमै हुने
बैंकिङ खबर । कर्मचारी संचय कोषका बचतकर्ताहरुले वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको औषधोपचार र १० लाख रुपैयाँसम्मको घातक रोगको उपचारको लागि पुनर्बिमा सुविधा स्वदेशमा नै पाउने भएका छन् । यससम्बन्धमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड र कर्मचारी संचय कोषबीच सम्झौता भएको छ …
राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा जागीर खुल्यो, ३१ कर्मचारी माग
बैंकिङ खबर । राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा जागीर खुलेको छ । संस्थानले सहायकदेखि व्यवस्थापकसम्मका लागि ३१ जना कर्मचारी मागेको छ । संस्थाले मागेको कर्मचारीमा नवौँ तहका व्यवस्थापक एक जना आठौं तहका सहव्यवस्थापक एक जना मागेको छ । यस्तै छैटौं तहका सहायक …
सेञ्चुरी बैंक र सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स बीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
बैंकिङ खबर । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड र सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड बीच पुस ६ गते बैंकास्योरेन्स सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तुलसीराम गौतम र सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको तर्फबाट प्रमुख …
प्रभु लाइफको नयाँ जीवन बीमा योजना : यस्ता छन् विशेषताहरु
बैंकिङ खबर । प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले नयाँ जीवन बीमा योजना“श्री वृद्घि जीवन बीमा योजना” सार्वजनिक गरेको छ । विहीबार सम्पन्न एक कार्यक्रमका बीच कम्पनी संचालक समितिका अध्यक्ष डा. आत्माराम घिमिरेले उक्त नयाँ जीवन बीमा योजना सार्वजनिक गरे । कार्यक्रयमा …
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी बीच सम्झौता
बैंकिङ खबर । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड बीच सम्झौता भएको छ । नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट वक्तव्यबाट व्यवस्था गरे बमोजिम २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा पुनर्बीमा व्यवस्थाको लागि सम्झौता सम्पन्न भएको …
प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सद्धारा अन्तक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
बैंकिङ खबर । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको ५ नम्बर प्रदेश कार्यालय बुटवलको आयोजनामा अभिकर्ता अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रममा बोल्दै, कम्पनिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज कुमार भट्टराइले कम्पनिको पछिल्लो अवस्था र भावी कार्य योजनाको बारेमा जानकारी दिदै …
बैंकिङ खबर । युनाईटेड इन्स्योरेन्सले मृतक बिमितको परिवारलाई बीमा रकम हस्तान्तरण गरेको छ । गुल्मी जिल्ला धुर्कोट गाउपालिका वडा नं. ३ निवासी जीप चालक शेर बहादुर थापाले लु. १ ज ३५०३ नम्बरको जीप सन्धिखर्कबाट हंशपुरका लागी लिएर जाँदै गर्दा गत …
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सको ८० प्रतिशत हकप्रद पुस १७ गतेदेखि
बैंकिङ खबर । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले पुस १७ गतेबाट चुक्तापुँजीको ८० प्रतिशत अर्थात १० बराबर आठ कित्ताको अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । माघ २१ गतेसम्म निष्काशन खुला रहने सेयरमा मंसिर ७ गतेसम्म कायम सेयरधनीले आवेदन दिन …
बैंकिङ खबर । तरकारी खेती एक नगदे बाली हो । जुन कृषहरुको आम्दानीको स्रोत पनी हो । तर कृषि पेसालाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरामा कृषकहरु अन्योल मै छन् । आफूले गरेको काममा भई परी आउने क्षतिबाट बच्न …